Apple dia manolotra ny solomaso zava-misy mitombo amin'ny filankevi-pitantanana | iPhone News
Apple dia manolotra ny solomaso zava-misy mitombo amin'ny filankevi-pitantanana
Angel Gonzalez | 21/05/2022 10:00 | About us, Apple products
ny lehibe habetsaky ny fampahalalana izay mipoitra amin'izao andro izao dia mampatahotra. Raha jerena indrindra fa ao anatin'ny tapa-bolana monja dia hanomboka ny WWDC22, hetsika lehibe indrindra amin'ny mpamorona Apple amin'ny taona. Ny rafitra miasa dia matetika ambara amin'ity hetsika ity. Vitsy dia vitsy i Tim Cook sy ny ekipany no nanapa-kevitra ny hanolotra vokatra amin'ny fanokafana. Na izany aza dia maro no mino izany RealityOS, ny rafitra fandidiana ho an'ny solomaso zava-misy ampitomboina an'i Apple, dia hiseho amin'ny fihaonambe. Raha ny tena izy, Efa natolotra ny filankevi-pitantanana ny famolavolana farany ny solomaso augmented reality hamidy amin'ny taona 2023.
Ny solomaso augmented reality an'i Apple dia hamidy amin'ny 2023
Ny solomaso augmented reality dia efa teo am-bavan'ny mpandinika hatramin'ny ela. Toa izao anefa no fotoana voafaritra, fotoana hahafantarantsika amin’ny farany hoe hoatran’ny ahoana ny endriny farany. Andrasana ity taranaka voalohany ity fitaovana goavana izy io ary misy vidiny mihoatra ny 1000 euros, azon'ny mpankafy sy mpamorona manokana. Amin'ny haavon'ny fitaovana dia hitondra efijery avo lenta, chip mahery ary sensor avo lenta, izay, amin'ny ampahany, no mety hahatonga ny vidiny ho lafo kokoa. Fa aza hadinoina ny tsipika farany: Apple dia te-hamorona solomaso zava-misy mitombo kely.
Apple dia afaka nandefa an-tsarimihetsika fampifandraisana lasa 2030
Araka ny Mark Gurman, mpitantana ny Apple Efa nanolotra ny tetikasa farany an'ny Apple Glasses ho an'ny filankevi-pitantanana izy ireo. Ity famelabelarana ity dia atao rehefa manana ny famokarana sy ny varotra efa akaiky ny vokatra. Raha ny marina, izahay dia tao ambadiky ny tsaho manodidina ireo solomaso zava-misy nampitomboina nandritra ny taona maro ary mety ho tena fiandohan'ny vokatra Apple izany. Toa Ny big apple dia nanombana ny fivarotana azy ho an'ny 2023.
Midika izany famelabelarana lehibe ny vokatra dia ilaina toa an'i Steve Jobs nampiditra ny iPhone tamin'izany fotoana izany. Izy ireo dia vokatra izay mampitombo ny lazany amin'ny marika ary, ambonin'ny zava-drehetra, dia afaka mametraka mialoha ny anatiny sy ivelany. Araka ny efa nolazaiko taminao, ny WWDC dia mifantoka fotsiny amin'ny rafitra miasa fa tsy afaka manapaka a zavatra iray hafa aiza no ahitantsika a sarin'ny RealityOS sy solomaso zava-misy nampitomboan'i Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple dia manolotra ny solomaso zava-misy mitombo amin'ny filankevi-pitantanana
Afaka milalao Fortnite amin'ny iPhone sy iPad ianao izao noho ny GeForce Now
HomePod vaovao mety ho tonga amin'ity taona ity